Divay fampakaram-bady - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Divay fampakaram-bady
John, mpianatr'i Jesosy, dia nitantara tantara iray mahaliana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ny asa fanompoan'i Jesosy tety an-tany. Jesosy dia nanampy ny fampakaram-bady noho ny henatra lehibe tamin'ny famadihana ny rano ho divay tena tsara indrindra. Tiako ny manandrana an'ity divay ity ary mifanaraka amin'i Martin Luther aho, izay nilaza fa: "Ny labiera dia asan'ny olona, ​​fa ny divay dia avy amin'Andriamanitra".
Na dia tsy milaza na inona na inona momba ny karazan-divay tao an-tsain'i Jesosy ny Baiboly rehefa nanova ny rano ho divay tamin'ny fampakaram-bady izy, dia mety ho "Vitis vinifera", izay karazany avy amin'ny ankamaroan'ny voaloboka izay ampiasaina amin'ny divay ankehitriny. no hamokarana. Ity karazana divay ity dia mamokatra voaloboka manana hoditra matevina sy vato lehibe kokoa ary mazàna mamy kokoa noho ny divay latabatra fantatsika.
Hitako fa mahagaga fa ny fahagagana ampahibemaso voalohany nataon'i Jesosy tamin'ny famadihana ny rano ho divay dia niseho tamin'ny ankapobeny teo amin'ny sehatra manokana, tsy nisy nahatsikaritra na inona na inona ny ankamaroan'ny vahiny tao amin'ny fampakaram-bady. Nomen’i Jaona anarana ilay fahagagana, famantarana izay nanehoan’i Jesosy ny voninahiny (Jao 2,11). Ahoana anefa no nanaovany izany? Tamin’ny fanasitranana ny olona, ​​Jesosy dia nanambara ny fahefany hamela heloka. Nasehony tamin’ny fanozonana ny aviavy fa hihatra amin’ny tempoly ny fitsarana. Tamin’ny fanasitranana tamin’ny Sabata, Jesosy dia nanambara ny fahefany momba ny Sabata. Tamin’ny nananganany ny olona tamin’ny maty, dia nasehony fa izy no fananganana ny maty sy fiainana. Tamin’ny famahanana olona an’arivony no nanambarany fa izy no mofon’aina. Tamin’ny fanomezana tamim-pahalalahan-tanana tamin’ny fanasana fampakaram-bady tao Kana i Jesosy, dia nasehon’i Jesosy mazava tsara fa izy no mitana ny fahatanterahan’ireo fitahiana lehibe ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. « Ary Jesosy nanao famantarana maro hafa koa teo anatrehan’ny mpianany, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity. Fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak’Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin’ny anarany, satria mino ianareo” (Jaona 20,30:31).
Tena zava-dehibe io fahagagana io satria nanome porofo ny mpianatr'i Jesosy tamin'ny voalohany fa tena Zanak'Andriamanitra tonga nofo izy izay nirahina hamonjy an'izao tontolo izao.
Rehefa misaintsaina an'io fahagagana io aho dia hitako ato an-tsaiko ny nanovan'i Jesosy antsika ho zavatra be voninahitra kokoa noho ny tsy nisy antsika tamin'ny asany mahafinaritra teo amin'ny fiainantsika.
Andeha isika izao hijery ny tantara akaiky kokoa. Manomboka amin'ny fampakaram-bady any Kana, tanàna kely any Galilia izany. Toa tsy dia misy dikany loatra ilay toerana - fa ny mariazy. Ny fampakaram-bady no fety lehibe indrindra sy lehibe indrindra ho an'ny Jiosy - ny herinandro fankalazana dia naneho ny satan'ny fianakaviana vaovao eo amin'ny fiarahamonina. Ny fampakaram-bady dia fankalazana tokoa ka ny fanasana amin'ny fampakaram-bady dia matetika niresaka an-tsary tamin'ny famaritana ireo fitahiana tamin'ny vanim-potoana mesianika. Jesosy mihitsy no nampiasa ity sary ity mba hilazana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanoharana sasany.
Lany ny divay, ka nilaza tamin’i Jesosy i Maria, ka hoy i Jesosy: “Moa mifaninona akory izaho sy ianao, ravehivavy? tsy mbola tonga ny fotoako » (Joan 2,4 Baiboly Zurich). Amin’izao fotoana izao, i Jaona dia manondro fa i Jesosy dia mialoha ny fotoanany amin’ny zavatra ataony. Nanantena i Maria fa hanao zavatra i Jesosy satria nasainy nanao izay rehetra nasainy nataon’izy ireo ny mpanompo. Tsy fantatsika raha nieritreritra fahagagana izy na hivily kely mankany amin'ny tsenan'ny divay akaiky indrindra.
Hoy i Johannes: “Nisy siny vato enina nijoro teo akaiky teo, toy ny nampiasain’ny Jiosy hanaovana ny fanadiovana. Ny siny dia nitana teo anelanelan’ny roapolo sy zato sy valopolo litatra avy» (Johanes 2,6 Fandikan-teny Genève Vaovao). Ho an'ny fombafomba fanadiovana azy, dia naleon'izy ireo ny rano avy amin'ny fitoeran-javatra vato toy izay ny siny seramika ampiasaina amin'ny fomba hafa. Ity ampahany amin'ny tantara ity dia toa manan-danja lehibe. Efa saika hanova ny rano natao ho an’ny fanaon’ny Jiosy ho divay i Jesosy. Alao sary an-tsaina izay mety ho nitranga raha te hanasa tanana indray ny vahiny. Nitady ny siny rano izy ireo, ka samy ho feno divay! Tsy nisy rano intsony ho an'ny fombafombany. Noho izany, ny fanadiovana ara-panahy ny ota tamin’ny alalan’ny ran’i Jesosy dia nisolo ny fombafomba fanao. Ary Jesosy nanao izany fombafomba izany ka nosoloany izay tsara lavitra, dia ny tenany. Ary ny mpanompo nisotro divay ka nitondra izany tany amin'ny mpitandrina ny raharaha, dia hoy izy tamin'ny mpampakatra: Samia manome ny divay tsara aloha, ka raha mamo izy. , ny divay mahantra ; fa ianareo kosa nitahiry ny divay tsara mandraka ankehitriny.” (Jaona 2,10).
Nahoana araka ny eritreritrao no nandrakitra ireo teny ireo i John? Ho torohevitra amin'ny fanasana amin'ny ho avy na mba hampisehoana fa mahavita divay tsara i Jesosy? Tsia, ny tiako holazaina dia noho ny dikany an'ohatra. Ny divay dia tandindon'ny rany nalatsaka, izay mitondra ny famelana ny heloky ny zanak'olombelona rehetra. Ny ablutions ritual dia aloky ny tsara kokoa ho avy ihany. Jesosy nitondra zavatra vaovao sy tsara kokoa.
Mba hanamafisana an’io lohahevitra io, dia lazain’i Jaona eto ambany ny fomba nandroahany an’ireo mpivarotra teo anoloan’ny tempoly. Naveriny tao amin’ny teny manodidina ny Jodaisma ilay tantara: “Efa akaiky ny Paskan’ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema.” (Jaona. 2,13). Nahita olona nivarotra biby sy nanakalo vola tao amin’ny tempoly i Jesosy. Izy ireo dia biby natolotry ny mpino ho famelan-keloka sy vola nandoavana ny hetran’ny tempoly. Nofatoran’i Jesosy ny kapoka tsotra ary noroahiny ny olona rehetra.
Nahagaga fa nisy olona iray afaka nandroaka ireo mpivarotra rehetra. Heveriko fa fantatry ny mpivarotra fa tsy eto izy ireo ary maro amin'ny sarambabem-bahoaka koa no tsy maniry azy ireo eto. Nampihatra izay efa tsapan’ny olona fotsiny i Jesosy, ary fantatr’ireo mpivarotra fa maro kokoa izy ireo. Josèphe Flavius ​​dia milazalaza ny fiezahana hafa nataon’ny mpitondra jiosy hanova ny fomba amam-panao tao amin’ny tempoly; Amin'ireny tranga ireny, dia nisy tabataba be teo amin'ny vahoaka fa natsahatra ny ezaka. Tsy nisy na inona na inona nolavin’i Jesosy tamin’ny olona mivarotra biby hatao sorona na manakalo vola hatao fanatitra any amin’ny tempoly. Tsy nilaza na inona na inona momba ny saram-panakalozana nalaina tamin’izany izy. Ny toerana nofidina ho azy fotsiny no nomelohiny: “Nanao kotopia tamin’ny mahazaka Izy, ka nandroaka azy rehetra mbamin’ny ondry aman’omby ho eo an-kianjan’ny tempoly, dia nanidina ny vola tamin’ny mpanakalo vola sy nandondona ny latabatra ary niteny tamin’izay nanakalo vola. namidy ny voromailala: Ento iny ary aza atao fivarotana lehibe ny tranon’ny raiko! (Johanes 2,15-16). Nahazo tombony izy ireo noho ny finoana.
Tsy nisambotra an’i Jesoa ny lohandohan’ny finoana jiosy, fa fantatr’izy ireo fa nankasitrahan’ny vahoaka izay nataony, fa nanontany Azy kosa izay nanomezany fahefana hanao izao zavatra izao: “Inona no famantarana asehonao aminay fa mahazo alalana ianao? hanao izany?? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Ravao ity tempoly ity, fa amin’ny hateloana dia hatsangako indray izy” (Jao 2,18- iray).
Tsy nanazava tamin'izy ireo i Jesoa hoe nahoana ny tempoly no tsy toerana mety hanaovana an'io karazana hetsika io. Jesosy dia niresaka momba ny vatany, izay tsy fantatry ny mpitarika jiosy. Tsy isalasalana fa noheverin'izy ireo fa mampihomehy ny valinteniny, nefa tsy nosamborin'izy ireo izy izao. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia naneho fa nahazo alalana hanadio ny tempoly izy, ary ny teniny dia efa nanondro ny fandravana azy io tsy ho ela.
« Dia hoy ny Jiosy: Enina amby efa-polo taona no nanaovana ity tempoly ity, ka Hianao va hahatsangana azy amin’ny hateloana? Fa ny tempolin'ny vatany no nolazainy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Izy, dia tsaroan'ny mpianany fa efa nilaza izany Izy ka nino ny Soratra Masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy. » (Jao. 2,20- iray).
I Jesoa dia namarana ny sorona natao tao amin'ny tempoly sy ireo fombafomba fanadiovana ary ny mpitondra jiosy dia nanampy azy tsy nahy nanandrana namotika azy. Tao anatin'ny telo andro, na izany aza, ny zava-drehetra manomboka amin'ny rano ka hatramin'ny divay sy divay ka hatramin'ny ràny dia azo ovaina ara-panoharana - ny fombafomba maty dia nanjary ny volo misy ny finoana farany. Asandratro ho voninahitr'i Jesosy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny verako.